९१ वर्षीय वृद्धाको गर्भमा ६० वर्ष अघि मरेको बच्चा ! - Himalayan Kangaroo
९१ वर्षीय वृद्धाको गर्भमा ६० वर्ष अघि मरेको बच्चा !
Posted by Himalayan Kangaroo | २७ जेष्ठ २०७४, शनिबार ०४:०७ |
काठमाडौं । स्वास्थ्यमा आउने केही खराबी तथा शरीरमा देखिएको केही परिवर्तनलाई सामान्य रुपमा लिंदा वा जांच नगराउँदा त्यसले जिन्दगीमा निराशा ल्याईदिन सक्छ । यस्तै भएको छ , एस्तेला मेलेंडेज़लाई ।
एस्तेला तीस वर्षकी हुँदा गर्भवती भईन् । तर उनको बच्चा गर्भमै मर्यो । बच्चाको पूर्ण आकार नहुँदै मृत्यु भएकोले उनले आफू गर्भवती भए/नभएको यकिन गर्न समेत सकिनन् । त्यस यता उनि कहिल्यै गर्भवती भईनन् र समाजबाट बाँझो हुनुको हेपाई सहिरहीन् । गर्भवती नहुँदा पनि उनको पेट भने गह्रौं र ठूलो भइराख्यो । उनि, उनका श्रीमान सहित सबैले उनको पेटमा मासु पलाएको र त्यसकै कारण गर्भ नबसेको अनुमान गरे ।
माझि परिवारका उनिहरुसंग पर्याप्त पैसाको अभाव भएको कारण उपचारको लागि अस्पताल गएनन् तर उपचारको लागि जीवनभर पैसा जम्मा गरिराखे । एस्तेला डेढ वर्ष अघि अस्पताल पुगेर जांच गर्दा आश्चर्य र संगै परेकी थिईन् । त्यो अनुभव बाँड्नको लागि उनका श्रीमानको मृत्यु भइसकेको छ ।
डाक्टरहरुका अनुसार एस्तेलाको पेटमा मासु पलाएको नभई उनको गर्भमा मरेको बच्चा त्यहीं उनको गर्भमै रहिरहेको छ । ९१ वर्षीय एस्तेलाको उमेरका कारण उनको शल्यक्रिया गरेर उपचार गर्न नसकिने हुँदा उनले जीवनको आगामी वर्ष पनि यत्तिकै बाँच्नुपर्ने डाक्टरहरुले बताएका थिए । स्रोत
Previousअष्ट्रेलियामा स्नातक तहमा ‘फिजिक्स’ पढाइ र अवसर
Nextन्युजिल्याण्ड आइसिसी च्याम्पियन्स ट्रफी क्रिकेट प्रतियोगिताबाट बाहिरियो
विश्वकै जेठी विरालोको मृत्यु
२३ जेष्ठ २०७२, शनिबार ०२:३६
कुकुरको बच्चा भनेर किनेर लगेको जनावर, दुई वर्षपछि भालु रहेछ भन्ने थाहा पाएपछि …
२ जेष्ठ २०७५, बुधबार ०६:४२
१९ माघ २०७२, मंगलवार ०५:५९
राष्ट्रपतिका उम्मेदवार ट्रम्पविरुद्ध अमेरिकामा महिलाहरुले गरे नाङ्गो प्रदर्शन
४ श्रावण २०७३, मंगलवार ०३:२६